Soosaarayaasha & Keena Module-ka | Shiinaha LED Module Factory
Isku halaynta sare MDL WarmD Taxanaha
Tilmaamaha Waxsoosaarka Waxyaabaha Muhiimka ah · Wuxuu si toos ah ugu xidhaa danab xariiqa AC · Wuxuu la kulmaa shuruudaha California Cinwaanka 24 · PF> 0.97, THD <20% · Iskudhinta baaxada 5% - 100% Nooca Nambarka Badeecada Nooca (mm) Voltage (Vac) Power (W) CCT (K) Ra Rf Luminousflux (Im) Waxtarka (Im / W) MDL-A0C8 MDL-AOC8-300-S-L17D-WD φ100 120 17 1800 90> 0.95 1300 77 MDL-M8C2 MDL-M8C2-300-S-L30D -WD φ228.6 120 30 1800- 3000 90> 0.95 2900 97 ...
Iftiinka iftiinka LED-ka waxaa loola jeedaa isticmaalka LED-ka (diode-light-emitting diode) oo ah isha iftiinka dambe ee shaashadaha LCD. Marka loo barbardhigo CCFL-ta caadiga ah (qabow cathode tube) isha iftiinka hore, LED waxay leedahay astaamaha isticmaalka tamarta oo hooseysa, qiimo hooseeya, iftiin sare iyo nolol dheer, taas oo la filayo inay gabi ahaanba beddesho nidaamka iftiinka dambe ee soo jireenka sanadihii la soo dhaafay Iftiinka iftiinka iftiinka LED-ka waa sarreysaa, oo iftiinka iftiinka iftiinka LED-ka ma yaraan doono muddo dheer. Intaa waxaa dheer, ...
Sharaxaadda Alaabada ShineOn ee qalabka nalka korontada ee AC waxay ku saleysan yihiin xalal wadis IC gaar ah. Foomamka wax soo saarka waxaa ka mid ah waxyaabaha caadiga ah ee SMD DOB, taxanaha wax soo saarka AC-COB. Iyadoo la adeegsanayo nidaamka wadida toosan, oo leh mug leh, tilmaanta tilmaamaha iftiinka hooseeya. Waxyaabaha taxanaha ah ee AC-COB ee isku dhafan tiknoolajiyada 'COB technology' iyo teknoolajiyada moduleka AC waxay leeyihiin faa'iidooyinka madaxbannaan ee ShineOn, waxaa loo isticmaali karaa inay tahay badeecada ugu weyn ee lagu xoojiyo caymiska suuqa. Xalka flash-Frequency-ga hooseeya ...
Taabacsan LED Taabasho Joogtada ah Taxanaha hadda
Qeexitaanka alaabada Baaxadda midabka midabka midabkeedu u liito waa 2000K-3000K. Wax soo saarka ayaa badanaa loo isticmaalaa suuqa guriga, awoodduna way ka hooseysaa 20W. Iyagu waa beddelka tooska ah ee nalalka guluubka dhaqameed iyo laambadaha halogen-ka. Codsiga: Suuq geynta guriga - oo ku saleysan sida tooshka guriga, laambadaha dhulka, laambadaha derbiga, laambadaha miiska sariirta iyo wixii la mid ah Muuqaalada Muhiimka ah index Heerka ugu sareeya ee CRI / Rf / Rg (TM-30-18) 2835 LEDs if Labis, toosan l ...